सुनिहाङ्मा आत्महत्या प्रकरणः 'गलत प्रचार गरियो'::Hamro Koshi Awaj / awaz
सुनिहाङ्मा आत्महत्या प्रकरणः ‘गलत प्रचार गरियो’
आत्महत्या गर्न कसले बाध्य बनायो ?
धरानः केटापक्षका आफन्तले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै माइतीपक्षका आफन्तले एकोहोरो आरोप मात्रै लगाउनु दुःखद् हो भनिएको छ ।
ससुरा भीम माबो र मुजोतलुङ थाकथाकु माबोहाङका अध्यक्ष धनबहादुर माबोले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा अहिले सिंगापुरमा रहेको सुनिहाङमाका श्रीमान् आइत माबोको फेसबुक आइडी लगइन गरी अरू कसैले बुहारीलाई नग्न तस्वीर मागेर व्लाकमेलिङ गरेकोले उनले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘यसरी व्लाकमेलिङ गरेपछि मृतकका मामा श्रीमान् कुरुम्भङको सल्लाहमा निवेदन पनि दिइएको थियो । यो घटनाको बारेमा सुनिहाङ्माका मामा श्रीमान कुरुम्भङलाई सबै कुरा थाहा भएकोले यो घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सुनिहाङ्माको मृत्यु प्रकरणबारेमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले अनुसन्धानका लागि घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी बुहारीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने दोषी पत्ता लगाइ कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग पनि गरिएको छ ।
बुहारीको माइती पक्षले आफुहरुविरुत कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको र आफुहरुले वास्तविकता बाहिर आउछ भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सोसल मिडिया प्रयोग गरेर गरिएको गलत प्रचारबाजीले बुहारीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने कार्य भएको र यसले आफूहरुलाई मर्माहत बनाएको परिवारजनले बताएका छन् । ‘सम्पूर्ण मावो परिवारकै इज्जत, प्रतिष्ठानमाथि दाग लाग्नुका साथै शिर ढलेको महसुस भएको छ, अन्त्यमा बुहारी सुनिहाङ्माको न्यायका निम्ति हामी अझै पनि लागि परेका छौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
भदौ २२ गते सुनिहाङ्माले आफ्नै कोठामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । माइती पक्षले आशंका गर्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले ससुरासहित चारजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । पोष्टमार्टम रिपोर्ट र भिसेरा रिपोर्टमा ‘आत्महत्या’ देखिएपछि सोही आधारमा सरकारी वकिलले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि अदालतले जनही १ लाख ५० हजार धरौटीमा चारै जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
२०७७ ६ २३
गत भदौ २२ गते हाम्रो घरमा भएको दुखद घटना र त्यस घटनासग“ जोडिएर आएका केही गम्भिर विषयमा आम जनमानस,आफन्त,छरछिमेकीहरुमा केही विषयहरु प्रस्ट पार्नु पर्ने भएकोले यो विज्ञप्ति जारी गरेका छौ“ ।
सर्बप्रथम हाम्री बुहारी सुनिहाङमा लिम्बुको मृत्युको कारण हाम्रो परिवार धेरै दुखित भएको छ । मृतक बुहारीको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछौ । उनको मृत्युबाट माइती पक्ष तथा आफन्तजनमा परेको दुखलाई हामीले उत्तिकै महसुस गरेका छौ ।
बुहारी सुनिहाङमाले आत्माहत्या किन गरिन् ? भन्ने प्रश्न अझैपनि अनुत्तरित छ । हाल सिंगापुरमा रहेका हाम्रा छोरा, मृतक सुनिहाङमा लिम्बुका श्रीमान आइत माबोका अनुसार जब छोराको फेसबुक आइडी र पासवर्ड लगइन गरी अरु कसैले बुहारीलाई नग्न तस्बिर मागे र ब्लाकमेल गरेको कारणले हाम्रो बुहारी सुनिहाङमा लिम्बुले आत्माहत्या गर्न बाध्य भइन । छोराको फेसबुक लगइनका साथै नग्न तस्बिर मागीए पछि छोरा, बुहारी र बुहारीको मामा श्री मान कुरुङफाङले सल्लाहमा नै सिंगापुरमा निवेदन दिएका थिए । मृतक बुहारी सुनिहाङमा लिम्बुको मामा श्री मान कुरुङफाङलाई यि सबै घटनाहरुको जानकारी रहेको बुरुन आएकोले सत्य तथ्य घटनामा जानकारी दिई दोषी पत्ता लगाउने कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ“ ।
हामी आफैपनि सत्यतथ्य छानबिनको पक्षमा छौ । प्रहरी र सम्मानीत अदालत पनि छानबिनको क्रममा रहेको छ । तर बुहारी सुनिहाङमाको मृत्युसँग जोडेर हामी र हाम्रो परिवार प्रति गरिएका अतिरम्जित ढंगले गरिएका मिडियाबाजी, प्रचार र गलत आरोपहरुले शोकमाथि थप पिडा थपिएको छ । घटना घटिसकेपछि माइति पक्षबाट हामी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्धा दायर गरियो । हामीले वास्तविकतmा बाहिर आउछ भन्ने हेतुले सहयोग गर्यौ । तर पनि हामी विरुद्ध गलत आरोप लगाउने र कुप्रचार गर्ने जस्ता कार्यहरु रोकिएनन । काखमा भएका दुधे बच्चाहरुलाई छोडेर २८ दिन सम्म प्रहरीको कष्टडीमा बस्नु पर्यो जवकी घटना हुदा आमाजुहरु सञ्जु माबो र बिमला माबो आ आफ्नो घरमा थिए । घटनास्थलमा हुदै नभएको व्यक्तिलाई समेत माइती पक्षले कर्तव्य ज्यानमुद्धामा किटानी जाहेरी दिनु भयो । बुहारीले न्याय पाउछिन र वास्तविकता बाहिर आउछ भन्ने आशामै उनिहरुले कष्टडीमा बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गरे ।
(माइती पक्ष) कै चाहाना अनुरुप उनिहरु प्रहरी कष्टडीमा बसेका थिए तर उहा“हरुमा दुधे बच्चा र रोग ९ऋयखष्म ज्ञढ० लाग्दा सम्म मानविय संबेदना देखिएन । यसलाई हामीले अन्यथा लिएको छैनै“ । हामी पनि हाम्री बुहारीको मूत्युको वास्तविकता छानविनको पक्षमा छौ तर माइती पक्ष हामी माथि एकोहोरो लागिराख्नु भयो । वास्तविकता के हो ? भनेर नबुझि हामी माथि निरन्तर गरिएको प्रहारले स्वर्गिय बुहारीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने काम स्वयम माइती पक्षले नै गर्नुभयो । यस्ता कार्यले घटनाको वास्तविकता ओझेलमा परि पिडितले न्याय पाउनबाट बन्चित रहने सम्भावना रहन्छ । सोसल मिडिया प्रयोग गरेर गरिएको गलत प्रचारबाजीले बुहारीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने काम भयो, यस कुराले हामीलाई मर्माहित बनाएको छ । हाम्रो परिवारका साथै सम्पूर्ण मावो परिवारकै इज्जत, प्रतिष्ठा माथी दाग लाग्नुका साथै सम्पूर्ण मावो परिवारको शिर ढलेको महसुस भएको छ । अन्त्यमा बुहारी सुनिहाङमाको न्यायका निम्ती हामी अझैपनि लागि परिरहेको छा“ै । यो विषय सम्मानीत सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्धा र अनुसन्धान चलिरहेको हुदा हामी सम्मानीत अदालतलाई आवश्यक सहयोग गर्न सधै तयार छौ । २८ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेपछि असोज २१ गते बुधबार सम्मानित जिल्ला अदालतले हामीलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ । घटनाको सत्य, तथ्थ छानविन गरी हाम्री बुहारीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने दोषी पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कार्वाहीको माग गर्दै र हामीमाथि लगाईको गम्भीर आरोपको खण्डन गदै हाम्रो परिवारकी बुहारीप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली प्रकट गर्नु साथै गहिरो दुःख व्यक्त गदछौ ।
भीम माबो (ससुरा)
धन बा. माबो
मुजोतलुङ थाकथाकु माबोहाङ